Dhinacyada ku dagaalamaya Yemen oo gaaray xabad joojin toddobaad ah – STAR FM SOMALIA
Dowlada dalka Yemen iyo mucaaradka Xuutiyiin ayaa ku heshiiyay xabad joojin muddo toddobaad ah taasoo ka bilaabanaysa Isniinta.Sarkaal sare oo ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegay in xabadjoojintan ay dhaqangeli doonto maalin kahor kulanka la filayo in 15ka bishan isugu yimaadaan dhinacyada ku dagaalamaya Yemen dalka Switzerland.
Afhayeenka xuutiyinta Maxamed Cabdisalam ayaa sheegay in 14ka bishan la joojin doono dagaalada uu ku tilmaamay kuwa lagu soo gardarooday.
Dhinaca kale wasiirka cusub ee Arrimaha dibada dalka Yemen Abdel-Malek al-Mekhlafi oo hogaamin doono ergada ka socota xukuumada Hadi ayaa xaqiijiyay in xabad joojintu dhaqan geli doonto 14ka bishan aynu ku jiro oo ku beegan Isniinta soo socota.
Labada dhinac ayaa oggolaaday ajando qabyo ah iyo sharciyo aasaasi ah oo la isku raacay in shirka loogaga hadli doono kulanka ay qabanqaabisay Qaramada Midoobay.
Kulan hore oo dhacay bishii June ayaa lagu gaari waayay heshiis iyadoo labada dhinac midba midka kale ku eedeeyay inuusan raali ka ahayn heshiiska.
Dowlada Yemen iyo mucaaradka ayaa sheegay in ay haatan ka go’an tahay in gaaraan heshiis ayna soo afjaraan dagaalka sababay burbur baahsan inuu ku dhaco dalka Yemen.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dagaaladii ka bilowday Yemen bishii March ay ku dhinteen dad ku dhow lix kun oo ruux ayna ku dhaawacmeen tiro aan ka yaren soddon kun oo ruux. Dagaalkan ayaa sidoo kale waxaa ku barakacay ama ku qaxay boqolaal kun oo ku noolaa dalka Yemen.
Haweeneydii u horeysay oo loo doortay Xildhibaan dalaka sacuudi carabiya